ကန့်သတ်ကိုင်ပြီးတစ်ခုတည်းဂျာစီပိတ်ထည်,polyester ကွက်ထည်,သိုးမွေးထည်-yorgreat အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ။
တီရှပ်, undershirt, ညဝတ်အင်္ကျီဘောင်းဘီပွ, ပေါ့ပေါ့စားဆင်ယင်မှုအတွက်မရရှိနိုင်, ပေါ့ပေါ့ဘောင်းဘီတို။
များအတွက်ရရှိနိုင်T-shirt、Skirt、Fashion coat、Children's garments、Cappa.
များအတွက်ရရှိနိုင် အချိန်ကြာမြင့်စွာကျီရှပ်အင်္ကျီ, hoody, ချွေးထွက်, ပေါ့ပေါ့ကုတ်အင်္ကျီ, causual ဘောင်းဘီ ,Stuffed toy.
ဂျာစီ, အားကစား-ရှပ်အင်္ကျီ, အားကစား-စကတ်, အားကစားဝတ်စုံကိုများအတွက်ရရှိနိုင်,singlet ။
Yorgreat International Holding Limitedပြီးပိတ်ထည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏မျိုးသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ရောင်း, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်အထူးပြုဘယ်တရုတ်ကနေပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထည်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါသည်။.ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်စုကိုကုမ္ပဏီ ((Fujian Xiangsheng Trading Co., Ltd,Xiamen Yongxiangrui Trading Co., Ltd) နှင့်နှစ်ဦးကိုလက်အောက်ခံစက်ရုံများ (တဦးတည်းဇာထိုးစက်ရုံနှင့်တဦးတည်းပုံနှိပ်စက်ရုံ) နှစ်ခုလက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများသည်တို့ပါဝင်သည်။ အနားမှာ 500 ကျော်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများနှင့်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံများအဘို့အ servicing, ရှိပါတယ်။
Yorgreat International Holding Limited အဓိကအားဖြင့်အခြားအခွဲများ၏ကို IMP & EXP စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာပါဝင်နေသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထည်ထုတ်ကုန်အားကစား series နှင့်ပေါ့ပေါ့ wear စီးရီးအာရုံစိုက်ပါ။ အပြင်, ငါတို့သည်လည်းကြိုးထုတ်ကုန်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့် ပို. ပင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဘို့အစေခံ, ငါတို့အုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူဒေသခံအရင်းအမြစ်များကိုပေါင်းစပ်ပြီးမှာရည်ရွယ်သည်။ လွန်ခဲ့သော 8 နှစ်အတွက်ကျနော်တို့အရှေ့တောင်အာရှ, အလယ်တန်းအရှေ့, အမေရိက, အာဖရိက, ငါတို့၏ထုတ်ကုန်တင်ပို့ကြသည်။ နှစ်စဉ်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့် "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်မှုနဲ့စိတ်ရင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူဖောက်သည်ရွှေ့ဖို့" နှစ်စဉ်ကြီးထွားလာနှင့် 2015 ခုနှစ်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း 100 ရရှိထားပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ဝန်ဆောင်မှုသဘောတရားဖြစ်ပါတယ်။
အပြာအရောင် 1.8m 180g ပျော့ထိုးပြီး polyester တစ်ခုတည်းဂျာစီထည်
အဆိုပါရှုံ့ခုခံနှင့် nbsp & ၏ညီ; ပျော့ထိုးပြီး polyester တစ်ခုတည်းဂျာစီထည်အလွန်ကောင်းသောဖြစ်ပြီး, ထိုသို့ avaiable & nbsp ဖြစ်၏တီရှပ်, ပေါ့ပေါ့စ�
ထိုးပြီးတစ်ခုတည်း pique CVC အဖြူ 180g 1.85m
အဖြူ 180g 1.85m CVC တစ်ခုတည်း pique တီရှပ်နှင့်အားကစား-ရှပ်အင်္ကျီအဘို့အ avaiable ဖြစ်ပါတယ်ထိုးပြီး။
အနီရောင် 1.85m 200g 60% ဝါဂွမ်း 40% polyester CVC တစ်ခုတည်း pique
60% ဝါဂွမ်း 40% polyester CVC တစ်ခုတည်း pique, ပိုလို-ရှပ်အင်္ကျီအဘို့အသင့်လျော်ပျော့ဖြစ်ပါတယ်။
အလွန် solf 220g 1.85m 80% ဝါဂွမ်း 20% polyester CVC ပြင်သစ် Terry
solf 220g 1.85m CVC ပြင်သစ် Terry, ပေါ့ပေါ့ဝတ်စုံတီရှပ်အဘို့အရရှိနိုင်ပါသည်။
အလင်းအစိမ်းရောင် 120g 1.85m Poly အဓိကတစ်ခုတည်းဂျာစီထိုးပြီး
အလင်းအစိမ်းရောင် 120g 1.85m 42s Poly အဓိကတစ်ခုတည်းဂျာစီကိုအနည်းငယ်ပါးလွှာဖြစ်ပါသည်ထိုးပြီး။
tshirt များအတွက် 40 220g 1.85m ဝါဂွမ်း spandex ပြင်သစ် Terry ထည်
ဝါဂွမ်း spandex ပြင်သစ် Terry ထည်တီရှပ်, ပေါ့ပေါ့အဝတ်အဘို့အသင့်လျော်အလွန်ပျော့ပျောင်းသည်။
ပြောင်လက်တောက်ပသောအစိမ်းရောင် 190g 1.8m 65% polyester 35% ဝါဂွမ်းကို double pique ထိုးပြီး
ထိုးပြီး 65% polyester 35% ဝါဂွမ်းကို double pique ပိုလို-ရှပ်အင်္ကျီအဘို့အရရှိနိုင်ပါသည်။
မူပိုင်ခွင့် © 2021 Yorgreat International Holding Limited..မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး. မှပံ့ပိုးသည် dyyseo.com.